नेपाल आज | भारतमा एक साता भित्र खोप अभियान सुरु, नेपालमा यस्तो छ तयारी
मङ्गलबार, ०६ माघ २०७७
भारतमा एक साता भित्र खोप अभियान सुरु, नेपालमा यस्तो छ तयारी
बुधबार, २२ पुष २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
भारत सरकारले एक साता भित्र पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ । दुईवटा खोपले आपत्कालीन अनुमति पाएको दिनदेखि हिसाब गरेर दस दिनभित्र खोप अभियान सुरु गर्ने बताएको छ ।
कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपले आपत्कालीन अनुमति पाएका छन् । कोभिसिल्डको विकास अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले गरेको हो भने कोभ्याक्सिन भने भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको हो । कोभिसिल्डको उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युुट अफ इन्डिया (एसआईआई) हो भने कोभ्याक्सिन हैदराबादको भारत बायोटेकले नै उत्पादन गरिरहेको छ ।
यसअघि दुई चरणमा गरेर ‘ड्राई रन’ गरिएको थियो । खोप अभियानका तयारीको यथार्थ अवस्था थाहा पाउन उक्त ड्राई रन चलाइएको थियो । उक्त ड्राई रन सफल भएपछि भारत सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भारत सरकारले आगामी जुलाईसम्म ३० करोडलाई खोप लगाउने घोषणा पहिले नै गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा भने कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप देशभरि नै निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा ३ करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड महामारी विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाहरुलाई कोरोना खोप लगाइने भएको छ । बाँकी २७ करोडका सम्बन्धमा भने पछि निर्णय लिने बताइएको छ ।
भारतमा खोप अभियान सुरु भएको १५ दिनभित्र दक्षिण एसियाली मुलुकमा निर्यात गरिनेछ । छिमेकी मुलुकमा कोरोना खोप उपहारस्वरुप र बाँकी बिक्री गरिने बताएका छन् । खोपको मूल्य भारत सरकारले किन्दा परेको जति नै पर्ने जनाईएको छ।
भारत सरकारलाई पहिलो चरणमा प्रतिडोज २ सय भारतीय रुपैयाँमा १० करोड डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउने बताएका थिए । भारतले तत्काल कोरोना खोप निर्यात नगर्ने समाचार प्रकाशित भएपछि छिमेकी मुलुकहरु नेपाल, बंगलादेशलगायततका देशमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । नेपाल सरकारले भने भारत सरकार र खोप निर्यात कम्पनीसँग खोप आयातका बारेमा कुराकानी भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा कहिलेसम्म खोप आयात हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।
माओवादी नीति छट्टु स्यालको जस्तोः घरधनीलाई चिल देखाउने आफु कुखुरा चोर्ने [भिडियो अन्तरवार्ता]
माइक्रो वस दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते
ओलीलाई प्रचण्डको चेतावनीः तपाईंलाई अब म भित्तामा पुर्याउन सक्छु
‘ओलीले सहयोद्धाकै राजनीति ध्वस्त वनाए, प्रचण्ड–माधव समुहले जनतासँग माफ माग्नुपर्छ’ [भिडियोसहित]
सोमबार, १३ पुष २०७७
नेपाली भुमिमा ड्रोन उडाउँछन चीनियाँ लालसेना
शनिबार, २५ पुष २०७७
चिनियाँ राजदूत रास्ट्रपति कार्यालय छिरेपछी..
शनिबार, ०३ माघ २०७७
प्रधानमन्त्री हुनुअघि ओली भन्थे– संघीयता हाम्रो माग थिएन र होईन
सोमबार, ०६ पुष २०७७
विगतमा जस्तो लडाकु र निर्वाचनका नाममा अनियमिततता हुँदैनः प्रम ओली
अब जनजनको पहुँच सोझै न्युज रुममा
© २०२० नेपाल आज प्रा. लि. सबै अधिकार सुरक्षित।